Yintoni i-serif typeface kwaye isetyenziswa nini? | Abadali be-Intanethi
Yintoni i-serif typeface kwaye isetyenziswa nini?
Abayili bemizobo ziingcali ezinika ukubaluleka okukhulu ekukhetheni iifonti, njengoko ihlala isesona siseko siphambili soyilo. Ukukhetha uhlobo oluchanekileyo kuyilo ngalunye luya kunceda ukwenza umahluko phakathi koyilo oluqhelekileyo kunye nengcali. Ukuchwetheza kwakhona kunceda ukunxibelelana neemvakalelo ezahlukeneyo. Kukho iindidi ezahlukeneyo zokuchwetheza, ezona ziyaziwa kakhulu zezi: iSerif, iSans Serif, iBhalwe ngesandla kunye neDecorative.
La maqela efonti aneempawu ezahlukileyo ngokusekwe kubume befonti, ubungakanani, ubunzima, kunye nomlinganiselo womlinganiswa. Ngokuxhomekeke kwifonti oza kuyisebenzisa, uya kudlulisa imvakalelo enye okanye enye. Kulungile i-typography kwaye, emva kwayo yonke into, sisakhiwo esisembindini soyilo. Kwiposti yanamhlanje, siza kuchaza kwaye sipapashe iifonti zeserif kwaye xa kufanelekile ukuzisebenzisa.
1 Yintoni i-serif typeface?
2 Izimbo zefonti zeSerif
3 Kusetyenziswa nini i-serif typeface
Yintoni i-serif typeface?
I-serif typeface yenye ene-serif okanye i-terminal, oko kukuthi, iinkcukacha ezincinci ekupheleni kweeleta ze-stroke. Olu hlobo lochwethezo lunobuntu obunzulu kunye nemveli. Ngokuphathelele imvelaphi yayo, ngokwengcamango yamandulo, xa usebenzisa izixhobo ezinjengeebhrashi okanye iipeni, ababhali bashiya "imiqondiso" ekupheleni kokubetha ngalunye. Ngokuhamba kwexesha, le mivumbo yaba nobuchule ngakumbi kwaye yaphela ekubeni yinxalenye ebalulekileyo yolu hlobo lokubhala. Kukho iintlobo ngeentlobo zeefonti ngaphakathi kwesi sitayile esinje ngeRoma yakudala, iRoman yanamhlanje, i-slab kunye ne-egypt.
Ezinye zeefonti zeserif ezaziwayo zezi: Incwadi Antiqua, Courier, Courier New, Century Schoolbook, Garamond, Georgia, Times, Times New Roman, okanye Palatino.
Izimbo zefonti zeSerif
Ukuhlelwa kochwethezo lwe-serif kwamiselwa nguFrancis Thibodeau. Yayisekelwe kwikhonkco elisekiweyo phakathi kwe-serif kunye ne-antlers. Ngokusekelwe koku, wamisela ezi zimbo zilandelayo:
AmaRoma amandulo: phantse akukho mahluko phakathi kweempondo kunye neserif. Ikhonkco abalibonisayo lingqukuva. Ukupheliswa kwayo kubukhali kwaye isiseko sayo sibanzi. Imivumbo iyahluka, kwaye iyancipha kwaye iyancipha kwaye iyancipha. Ngokubhekiselele kwicala le-axis, ukuqina kwayo ku-oblique kwaye isithuba soonobumba sibanzi kakhulu. Kweli qela lingabandakanywa: iGaramond kunye neCaslon.
IsiRoman Transitional: umehluko phakathi kobunzima beempondo kunye ne-serif iqala ukubonakala, uxhulumaniso abanalo lusetyhula. I-serif inesiphelo esibukhali kakhulu kuneyangaphambili. I-stroke nayo iyahluka, kodwa endaweni yoko, umahluko phakathi komncinci kunye nokuqina ubonakala ngakumbi. Ulwalathiso lwe-axis yokuqina luthe tye ngakumbi kune-oblique. Ezinye iinguqulelo zohlobo lwamaRoma zi; Baskerville, Amaxesha okanye iNkulungwane.
IRoma yangoku: ngolu hlobo umahluko phakathi kweempondo kunye neserif uphawuleka ngakumbi, ngoqhagamshelo oluthe ngqo kuba i-serif yoonobumba bayo inomgca. Imivumbo iguquguquka kakhulu kunemeko yenguqu yamaRoma. Sinokuyiqwalasela njengamaRoma anamhlanje iBodoni, iCaxton, iNew Baskerville kunye neDidi.
umJiphutha: ixabiso leempondo kunye ne-serif zivutha kwaye zinekhonkco lesetyhula. I-serif ingqindilili okweenkonkxa. Kuxhomekeke kuhlobo lochwethezo, inokuba sisikwere, njengeRobotik, okanye ingqukuva, njengeCooper Black. Isalathiso se-axis yokuqina ngokuqhelekileyo sithe tye.
Kusetyenziswa nini i-serif typeface
Kukho usetyenziso oluninzi onokuthi ulunike olu hlobo lweefonti, kuxhomekeke kubuhle kunye nomsebenzi ofuna ukuwunika. Ewe, lii-serif typefaces nazo zinexabiso elisebenzayo kokubhaliweyonjengoko benditshilo ngaphambili, zezona zifanelekileyo kwiitekisi ezinde nezincinci. Ubukhulu becala sinokuzibona kumaphephandaba ashicilelweyo. Ukuba into oyifunayo kukudlulisa isiko, i-classicism, ubuhle okanye ubunzulu, iifonti ze-serif zezona ntlobo zifanelekileyo.
Ezi zezinye zezinto ekufuneka uzithathele ingqalelo xa ukhetha uhlobo oluthile lwefonti okanye olunye:
Ubude bombhalo: Njengoko besele ndikuxelele ngaphambili, iifonti zeserif zilungele ukusetyenziswa kwezicatshulwa ezinobungakanani obuncitshisiweyo kunye nolwandiso lombhalo omde. Ngokuqinisekileyo ukuba ufunda incwadi ngoku, ifonti equlethwe yi-serif.
Uluntu: Iifonti zigqithisa iimvakalelo, ngoko ayizizo zonke ezijoliswe kubaphulaphuli abafanayo. Kanye njengokuba umbala ubalulekile, imilo yefonti nayo iya kunceda ukuchaza itekeni yakho. Ngokubanzi, olu hlobo lokubhala lusetyenziswa kwiinkampani ezinzulu nezisesikweni, ezinjengamagqwetha. Nangona zikwasetyenziswa kumacandelo antsonkothileyo, anje ngobuhle obutofotofo, ifashoni okanye iimveliso zemoto.
Inkxaso: Iifomathi ezisetyenziswa kakhulu yimithombo yeendaba eprintiweyo equlethe imibhalo emide. Kwenzeka okufanayo kwimidiya ye-intanethi efana neeblogi okanye amanqaku.
Ukwahlukana: Izithuba phakathi kweempawu nazo zibalulekile, iifonti ezifinyeziweyo kakhulu azikhuthazwa ukuba zifundwe, yinto ekufuneka uyithathele ingqalelo.
Uyilo: Ngokuxhomekeke kuyilo lweetekisi, ngamanye amaxesha kunomdla ukudibanisa iifonti zeserif kunye neefonti ze-san serif, ukuvelisa umahluko kunye nokuba okubhaliweyo akukho monotonous.
Nali ikhonkco kwenye isithuba malunga olona hlobo lusetyenziswayo lweserif. Ndiyathemba ukuba eli nqaku likuncede ukuba ufunde ngakumbi malunga neefonti ze-serif, izimbo zazo, kunye nokuba wazi nini ukuzisebenzisa.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Yintoni i-serif typeface kwaye isetyenziswa nini?
Ngaba kuluncedo ukuthenga abalandeli kwi-Instagram?